Sakafo hazan-dranomasina lehibe indrindra: Trondro manidina sy Cou Cou avy any Barbados
Sary avy amin'ny Cooking&Cocktails
Ahoana ny fomba fanaovana trondro manidina sy Cou Cou?
Ny sakafon'i Barbados dia vilany fandrahoan-tsakafo mahafinaritra misy tsiro miavaka izay mampifangaro ny fitaomana avy any Angletera, India ary Afrika mba hamoronana sakafo mahavariana sy isan-karazany.
Mampiasa vokatra tsara avy any an-toerana ny chef Bajan mba hamoronana sakafo matsiro indrindra eran-tany. Ny sakafo Bajan mahazatra izay mety ho hitanao ao amin'ny nosy dia ny macaroni pie, ny mofomamy trondro, ny vary sy ny peas, ny conkies, ny fanodinana voanio, ary mazava ho azy ny sakafom-pirenena Barbados manidina trondro sy cou cou.
Na dia eo aza ny sakafo mahafinaritra maro any Barbados, anio isika dia hiresaka momba ny trondro manidina sy ny fomba fanamboarana cou cou satria raha misy sakafo Bajan iray izay tsy tianao ho diso, dia ity!
Ny sakafo nasionalin'i Barbados dia sakafo mahafinaritra ary iray izay tena mirehareha amin'ny mponina eo an-toerana.
Ny kintan'ny fampisehoana dia trondro manidina etona na nendasina, miaraka amin'ny sisiny cou cou, izay mampahatsiahy ny polenta na grits, ho an'ireo izay tsy zatra ny sakafo. Ny ranom-boasary makirana, ny zava-manitra ary ny legioma vaovao dia mampiakatra ny tsirony, mamorona sakafo Bajan mahafinaritra sy tena izy.
Raha sendra mitsidika an'i Barbados atsy ho atsy ianao dia tsara kokoa ny mitondra fahazotoana ho anao. Hilaza aminao bebe kokoa momba ny sakafo izahay ato anatin'ny fotoana fohy, fa aloha, ity misy ambadika.
Inona no atao hoe Flying Fish?
Ny trondro manidina dia karazana trondro teratany any amin'ny nosy Barbados. Raha ny marina, dia tena fahita teo amin’ny ranon’ilay nosy ny trondro taloha, ka nantsoina hoe “tanin’ny trondro manidina” i Barbade. Noho izany, tsy mahagaga raha ny trondro manidina no singa fototra amin'ny sakafom-pirenena Bajan.
Tena zava-dehibe amin'ny vahoaka Bajana ny trondro manidina ka hahita marika mampiseho trondro manidina amin'ny volam-pirenena ianao, ary hita ao amin'ny fango an'ny Barbados Tourism Authority mihitsy aza izany.
Mbola hahita trondro manidina ianao ao amin'ny sakafo amin'ny trano fisakafoanana manerana ny nosy. Ny trondro manidina dia matsiro tsara raha masaka tsotra, amin'ny etona miaraka amin'ny ranom-boankazo misy asidra, ary mahafinaritra koa ny endasina. Mankanesa any amin'ny trondro Bajan mba hanandrana ny fomba nentim-paharazana trondro manidina natolotry ny mponina.
Inona no atao hoe Cou Cou?
Cou cou dia sakafo ho hitanao betsaka any Barbados, saingy tsy dia mahazatra loatra amin'ny tontolo hafa. Raha mbola tsy nanandrana izany ianao taloha, alaivo sary an-tsaina ny zavatra mitovy amin'ny polenta na grits amin'ny texture.
Avy amin'ny fitambaran'ny koba katsaka sy okra no nanaovana azy. Mitambatra ireo akora roa ireo mba hamorona karazana lafarinina mamy. Cou cou any Barbados dia sakafo mahamay sy mampionona izay mifanaraka tsara amin'ny sasany amin'ireo sakafo Bajan spicier - toy ny trondro manidina! Mahafinaritra koa miaraka amin'ny saosy masiaka, izay ho hitanao betsaka amin'ny sakafo Bajan.
Matetika, ny cou cou dia aroso amin'ny fomba nentim-paharazana, dia amin'ny famolavolana azy ho oval, amin'ny fampiasana vilia enamel. Na, raha te ho tena marina ianao, dia mampiasa akorandriaka laoka, avy amin'ny voan'ny hazo hita maniry any anaty ala any amin'ny tany mafana sy any Amerika. Azo atao amin'ny akora hafa koa ny cou cou, toy ny mofo, ovy na akondro maitso.
Trondro manidina sy Cou Cou Recipe
Amin'ny fomba mahazatra, ny Bajana dia mahandro an'io fomba fanao io amin'ny zoma na asabotsy, fa mazava ho azy fa raha mianatra manao ny anao ianao dia afaka manompo azy isaky ny tianao! Mampiaiky volana ny namanao sy ny fianakavianao amin'ity tsiro matsiro amin'ny tropika ity. Toy izao ny fomba hanaovana azy.
Ho an'ny trondro:
Trondro manidina 4 (raha tsy misy izany any amin'ny toerana misy anao dia azonao atao ny manolo ny basse)
Vovoka tongolo gasy
Ho an'ny zava-manitra:
Tongolo lohataona 3
1 tsp ginger vaovao
1 sakay scotch bonnet
1 sotro ny ravin-thyme
1/2 tsp zava-manitra mifangaro
1 tsp tongolo gasy
5 g ny thyme
10 g ny vovon-kary
5 g ny vovon-tsigara
Menaka oliva 6 sotro
Ho an'ny cou cou:
140 g katsaka
Ataovy aloha ny zava-manitra. Atambatra ao anaty “processeur” sakafo daholo ny akora rehetra, afa-tsy ny vinaingitra, ary apetaho tsara. Apetraho ao anaty siny misy tombo-kase ny paty ary ampio ny vinaingitra. Afangaro tsara ary asio fotoana araka izay tianao. Te hamela an'io mandritra ny adiny roa eo ho eo ianao alohan'ny hampiasanao azy, ka atokàny mba hampidirana azy.
Afangaro amin'ny sokay sy sira ary dipoavatra ny trondro.
Apetraho ao anaty lapoely ny akora misy saosy ary ento mangotraka, miaraka amin'ny menaka kely. Ampio sotro iray ny zava-manitra nomaninao teo aloha.
Afangaro ao anaty vilany mitokana ny akora ho an’ny cou cou, afa-tsy ny katsaka, ary ampangotrahina. Haniry izany amin'ny hafanana be ianao. Rehefa masaka dia sasana ny fangaro ary ario ny tongolo sy ny thyme. Tehirizo ireo tapa-kazo okra hampiasaina any aoriana.
Avereno amin'ny afo ny cou cou pan ary asio kobam-bary, afangaro tsara mandra-pahaforonao fangaro matevina. Ampio ny okra.
Efa vonona ny sakafo! Apetraho eo amin'ny vilia ny cou cou ary asio trondro iray feno trondro sy saosy fanampiana ara-pahasalamana ary ankafizo ny tsironao Barbados! Na angamba, manaova fitsangatsanganana mankany amin'ity paradisa nosy mahafinaritra ity.
Ny fomba tsara indrindra hanandrana ny fomban'i Barbados dia ny mitsidika ny Repoblika Vaovaon'i Barbados!
Vaovao misimisy kokoa momba an'i Barbados
More on: Tourism | Africa | Barbados | Sandals Resorts
Previous Manao tatitra momba ny toetry ny nosy izao ilay mpandraharaha sinoa any Tonga
Manaraka Ny mpandidy CHOP dia manasaraka ny kambana mitambatra izay ao an-trano ankehitriny